တအားလက်သရမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကို bff တော်ထားရတဲ့အခါ... - For her Myanmar
ယောင်းတို့သူငယ်ချင်းတွေထဲက လက်သရမ်းတတ်တဲ့ မန်းရှင်းခေါ်လိုက်ကြပါဦး…
ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ တင်ပါးကို ဖြန်းခနဲ လှမ်းရိုက်လိုက် ၊ ရင်ဘတ်နားကို ဘတ်ခနဲ ပုတ်လိုက်နဲ့ လက်သရမ်းတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး ကြုံဖူးကြလား ယောင်းတို့ရေ… မင်မင့်ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်တွေထဲမှာတော့ ဒီလိုလက်သရမ်းတတ်တဲ့ကောင်တွေ အရမ်းပေါပဲ( သူများသာပြောနေတာ မင်မင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ ပုပ်ထဲက ဒီပဲပါပဲ ..ဟိဟိ 😛 )
အဆောင်မှာတူတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆို ပိုလို့ဆိုးသေး …မင်မင်တို့က အဆောင်ခန်းထဲမှာ ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲမပါတော့ ထောင့်ဆုံးမှာဆောက်ထားတဲ့ ရေချိုးခန်းဆီ ရေချိုးသွားရတယ်ရယ်… အာ့တော့ အခန်းထဲမှာ အဝတ်တွေလဲသွားရတာလေ .. အဝတ်လဲမယ့်အချိန်ဆို ဘယ်နားကဝင်လာပြီး စနောက်လက်သရမ်းဦးမလဲဆိုပြီး ဒီကောင်တွေကို ကြောက်လိုက်ရတာ အမော ..
Related Article >>> မေတ္တာတုံးစရာကောင်းသော သူငယ်ချင်း(၇)မျိုး
အဝတ်လဲပြိုင်နေသလိုပဲ (ပြိုင်ပွဲသာရှိမယ်ဆို မင်မင်က ဗိုလ်စွဲလောက်တယ်..) လဲနေတုန်း သူတို့အရိပ်အယောင်များ တွေ့လိုက်ရင်တော့ ဖနောင့်နဲ့တင်ပါး တစ်သားတည်း ကျအောင်သာ ပြေးပေတော့ပဲ…
ပြေးမလွတ်လို့ လက်သရမ်းပြန်တော့လည်း လက်နဲ့တင် အားမရကြပြန်ဘူးလေ..ဟယ် ကမကြီး ကိတ်လိုက်တာနော်လို့ မိန်းမအချင်းချင်း မြိန်ရေယှက်ရေတွေပြောပြီး နားကလောအောင် စတာကြီးက ရှိသေး.(ဒါပေသိ ..အကိတ်ဆို ကြိတ်ပြီးကျေနပ်မိတာတော့ ဝန်မခံလို့မရပြန်ဘူး :3 )
ဒီလိုဘော်ဒါတွေနဲ့ လက်သရမ်းတဲ့ပိုးက ကိုယ့်ဆီပါ ဓာတ်ကူးသွားရောလေ.. မင်မင့်အိုပါးက မင်မင့်ထက်နှစ်ဆလောက် ပိုကိတ်နေတော့ သူနဲ့တွေ့တဲ့နေ့ဆို တင်ပါးကို မသိမသာလေး ရိုက်လိုက်ရမှ (တော်တော်ဆိုးတဲ့ပိုး အာ့လိုလေးမှ လက်မသရမ်းရရင် မရိုးမရွတွေကိုဖြစ်လို့..) မင်မင်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေ လွှဲချတာပဲ.. နင်တို့ဆီက ကူးတာတို့ဘာတို့.. သူတို့ကလည်း နင်ကဓာတ်ခံကိုက ပါပြီးသားမို့လို့ဆိုပဲ…ဒါကိုလည်း ငြင်းမရပါဘူးလေ…
ဘာပဲပြောပြောပါ..လက်သရမ်းတဲ့ ဘော်ဒါတွေရှိတာက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်နဲ့ တကယ်တမ်းတော့ အတော်လေး ပျော်စရာကောင်းပါတယ်.. ချစ်လို့စတာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလည်း အတော်လည်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေပြီမို့ သူတို့နဲ့ဆုံလို့ ဒီလိုမပြုမူရင်တောင် ဟာတာတာကြီးကိုဖြစ်လို့.. ဟဲ့နင်နေမကောင်းဘူး.. စိတ်မမှန်တော့ဘူးလားတောင် မေးယူရတဲ့အထိပဲ…
ဘွင်းဘွင်းပြောရရင် မင်မင်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက ပျော်စရာတစ်ခုလို့ ခံယူပြီး သာယာမှုနဲ့ သာသနာပြုနေပါပြီ… ယောင်းတို့ဘော်ဒါတွေကြားမှာ ဒီလိုလက်သရမ်းတတ်သူတွေရှိ်ရင်လည်း မင်မင့်ကိုပြန်ပြီး ဖောက်သည်ချပေးကြပါဦး….
ယောငျးတို့သူငယျခငျြးတှထေဲက လကျသရမျးတတျတဲ့ မနျးရှငျးချေါလိုကျကွပါဦး…
ကိုယျနဲ့တှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ တငျပါးကို ဖွနျးခနဲ လှမျးရိုကျလိုကျ ၊ ရငျဘတျနားကို ဘတျခနဲ ပုတျလိုကျနဲ့ လကျသရမျးတတျတဲ့ သူငယျခငျြးမြိုး ကွုံဖူးကွလား ယောငျးတို့ရေ… မငျမငျ့ဘျောဒါဘျောကြှတျတှထေဲမှာတော့ ဒီလိုလကျသရမျးတတျတဲ့ကောငျတှေ အရမျးပေါပဲ( သူမြားသာပွောနတော မငျမငျကိုယျတိုငျလညျး ဒီ ပုပျထဲက ဒီပဲပါပဲ ..ဟိဟိ 😛 )
အဆောငျမှာတူတူနတေဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဆို ပိုလို့ဆိုးသေး …မငျမငျတို့က အဆောငျခနျးထဲမှာ ရခြေိုးခနျးအိမျသာတှဲမပါတော့ ထောငျ့ဆုံးမှာဆောကျထားတဲ့ ရခြေိုးခနျးဆီ ရခြေိုးသှားရတယျရယျ… အာ့တော့ အခနျးထဲမှာ အဝတျတှလေဲသှားရတာလေ .. အဝတျလဲမယျ့အခြိနျဆို ဘယျနားကဝငျလာပွီး စနောကျလကျသရမျးဦးမလဲဆိုပွီး ဒီကောငျတှကေို ကွောကျလိုကျရတာ အမော ..
Related Article >>> မတ်ေတာတုံးစရာကောငျးသော သူငယျခငျြး(၇)မြိုး
အဝတျလဲပွိုငျနသေလိုပဲ (ပွိုငျပှဲသာရှိမယျဆို မငျမငျက ဗိုလျစှဲလောကျတယျ..) လဲနတေုနျး သူတို့အရိပျအယောငျမြား တှလေို့ကျရငျတော့ ဖနောငျ့နဲ့တငျပါး တဈသားတညျး ကအြောငျသာ ပွေးပတေော့ပဲ…
ပွေးမလှတျလို့ လကျသရမျးပွနျတော့လညျး လကျနဲ့တငျ အားမရကွပွနျဘူးလေ..ဟယျ ကမကွီး ကိတျလိုကျတာနျောလို့ မိနျးမအခငျြးခငျြး မွိနျရယှေကျရတှေပွေောပွီး နားကလောအောငျ စတာကွီးက ရှိသေး.(ဒါပသေိ ..အကိတျဆို ကွိတျပွီးကနြေပျမိတာတော့ ဝနျမခံလို့မရပွနျဘူး :3 )
ဒီလိုဘျောဒါတှနေဲ့ လကျသရမျးတဲ့ပိုးက ကိုယျ့ဆီပါ ဓာတျကူးသှားရောလေ.. မငျမငျ့အိုပါးက မငျမငျ့ထကျနှဈဆလောကျ ပိုကိတျနတေော့ သူနဲ့တှတေဲ့နဆေို့ တငျပါးကို မသိမသာလေး ရိုကျလိုကျရမှ (တျောတျောဆိုးတဲ့ပိုး အာ့လိုလေးမှ လကျမသရမျးရရငျ မရိုးမရှတှကေိုဖွဈလို့..) မငျမငျကတော့ သူငယျခငျြးတှေ လှဲခတြာပဲ.. နငျတို့ဆီက ကူးတာတို့ဘာတို့.. သူတို့ကလညျး နငျကဓာတျခံကိုက ပါပွီးသားမို့လို့ဆိုပဲ…ဒါကိုလညျး ငွငျးမရပါဘူးလေ…
ဘာပဲပွောပွောပါ..လကျသရမျးတဲ့ ဘျောဒါတှရှေိတာက စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈသယောငျယောငျ ဘာယောငျယောငျနဲ့ တကယျတမျးတော့ အတျောလေး ပြျောစရာကောငျးပါတယျ.. ခဈြလို့စတာဘာဖွဈလဲဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျမှာလညျး အတျောလညျးအကြှမျးတဝငျဖွဈနပွေီမို့ သူတို့နဲ့ဆုံလို့ ဒီလိုမပွုမူရငျတောငျ ဟာတာတာကွီးကိုဖွဈလို့.. ဟဲ့နငျနမေကောငျးဘူး.. စိတျမမှနျတော့ဘူးလားတောငျ မေးယူရတဲ့အထိပဲ…
ဘှငျးဘှငျးပွောရရငျ မငျမငျကတော့ သူငယျခငျြးတှထေဲက ပြျောစရာတဈခုလို့ ခံယူပွီး သာယာမှုနဲ့ သာသနာပွုနပေါပွီ… ယောငျးတို့ဘျောဒါတှကွေားမှာ ဒီလိုလကျသရမျးတတျသူတှရှေိရငျလညျး မငျမငျ့ကိုပွနျပွီး ဖောကျသညျခပြေးကွပါဦး….
Tags: friends, Fun, Hands, Letters from Heart, Playful, sexual